ဒါကတော့ လမ်းသူရဲမုန့် ခေါ် ကီးမား(အဲဒါက ရောင်းတဲ့ဆိုင်ကခေါ်တယ်)ခေါ် မုန့်ပျစ်သလက် ..ဘယ်လိုခေါ်ခေါ်ပါ။ စားလို့ကောင်းဖို့ လိုတယ်လေ။ တကယ်စားကောင်းပါတယ်။ မဆလာနံ့သင်းသင်း၊ငရုတ်သီးစပ်စပ်လေးနဲ့ စားရတာ အရမ်းကြိုက်တယ်။ တခါတလေဆို တပွဲ မ၀လို့ ၂ ပွဲတောင်ဆက်စားမိသေးတယ်။ ရန်ကုန်မှာနေတုန်းက သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်ညနေဘက်တွေ အမြဲနီးနီးသွားစားဖြစ်တဲ့ဆိုင်ပါ။ ဆိုင်လေးက တော့ ဆီဒိုးနားဟိုတယ်နောက်က စက်မှု၁ လမ်းလို့ခေါ်မလား ပထမဆုံးချိုးရတဲ့လမ်းပဲ။ဆက်သွားရင် ရန်ကင်းတိုက်ခန်းတွေဘက်ရောက်သွားမယ်။ ဆိုင်လေးက လဲ တကယ့်လမ်းဘေးဆိုင်ပါ။ ခုံပုလေးတွေနဲ့။ ဒါပေမယ့် လာစားကြတဲ့သူတွေမှ အများကြီး။ ညနေဘက်ဆို ဆိုင်ရှေ့ မှာကားတွေကို စီလို့ ။ ဈေးကလည်း မသေးဘူးပြောရမှာပေါ့။ နောက်ဆုံးစားခဲ့တော့ တပွဲ ၅၀၀ လားမသိဘူးဖြစ်သွားပြီ။ သူ့ဆိုင်မှာ ရေခဲသုပ်၊သီးစုံ၊ကြာဇံချက်၊ လက်ဖက်သုတ်၊ကျောက်ပွင့်သုတ်တွေလည်းရတယ်။ အသုတ်တွေကလည်း လက်ရာကောင်းတယ်။ တခါတလေဆို အဲဒီဆိုင်မှာပဲ ရှိတာ မှာစားပြီး ထမင်းလွတ်သွားတဲ့နေ့တွေလဲရှိတယ်။ အဲဒီဆိုင်ကနေ ဆယ်မိနစ်လောက်ဆက်သွားလိုက်ရင် သဘာဝ ဆိုတဲ့ ထိုင်းဆိုင်မှာလည်း ဟင်းတွေကောင်းပြီး စားရတာ တော်တော်တန်ပါတယ်။ ဒီတခေါက်ကတော့ ပါဆယ်ပဲဝယ်စားခဲ့လို့ ဓာတ်ပုံမရိုက်ထားမိဘူး။
ရေမုန့် (ကီးမား)(လမ်းသရဲမုန့်) ခေါ်ချင်သလိုခေါ်ပါ။ စားကောင်းဖို့ အရေးကြီးတယ်
အစပ်အရမ်းကြိုက်တတ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ ရခိုင်စာတွေကို ကြိုက်ကြမယ်ထင်တယ်။ ဒီတော့ မင်းလမ်းရခိုင်မုန့်တီဆိုင် ကို နှစ်ခါသွားစားဖြစ်တယ်။ RC2 နားမှာဖွင့်ထားတာ ဆိုင်ကြီးအကြီးကြီးပဲ။ ပင်လယ်စာတွေလည်း အစုံ အကုန်ရတယ်။ ဒါပေမယ့် ၀င်စားဖြစ်တဲ့အချိန်တွေက လေဆိပ်ကအပြန်၊ပဲခူးကအပြန်ဆိုတာမျိုးမို့ ဘိုက်ကပြည့်နေပီ။ အရမ်းဟဲဗီးတွေမှာမစားပဲ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ရခိုင်မုန့်တီသုပ်လေး၊ဂုံးသုပ်၊ အရွက်စိမ်းကြော် ဆိုတာလေးတွေ မှာစားကြတယ်။စပ်လိုက်တာတော့ ရှယ်ပဲ။ ဒါပေမယ့် ထန်းလျက်ရည်လေးနဲ့ မုန့်လက်ဆောင်းလေး သောက်ရတော့အစပ်ပြေတာပေါ့။ အဲ ..ဒါပေမယ့် တိုက်ဆိုင်တာလား ဘာလားတော့မသိဘူး။ အဲဒီမှာစားပြီးတိုင်း ၀မ်းပျက်တယ်ရှင်။ မပြန်ခင် ၃ ရက်လောက်ကသွားစားမိတာ ပြန်ရောက်တဲ့ထိကို ဗိုက်ပြန်မကောင်းဘူး။အဲဒီတုန်းကတော့ အသိတွေကိုပြောမိသေး နောက် ဘယ်တော့မှသွားမစားဘူး ဘာညာပေါ့။ ဒါပေမယ့် အခုလို ပုံလေးကိုပြန်မြင်ရတော့လည်း ဒီတခါ ပြန်လည်း သွားစားဦးမှာပဲ။ ၀မ်းပျက်တာ ဆေးသောက်လိုက်လို့ ရတယ်လေ။ ဒီလိုအစားအစာမျိုးက ကိုယ်ပြန်တုန်းလေးပဲစားရတာမဟုတ်လား။ 😀
Seafood Buffet @ Traders
တခါတလေမှာ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ၀က်အူခြောက်ကြော်ကြွပ်ကြွပ်လေးကို ခေါက်ဆွဲလေးနဲ့ စားရတာလည်း ကောင်းပြန်ပါတယ်။ ဒါကတော့ ရန်ကုန်ကဆိုင်မဟုတ်ဖူးနော်။ တစ်ပွဲနှစ်ထောင် ဆိုတော့ နယ်မြို့လေးအနေနဲ့ဆို ဈေးမြင့်တယ်ပြောရမယ်။ ဒါပေမယ့် ကောင်းလွန်းလို့ ၀ချင်ဝပစေ့..နှစ်ပွဲစားခဲ့ကြတယ်။
Entry filed under: အစားအသောက်.
မြသန်းတင့် -ကျွန်တော်နှင့် ဂျာနယ်ကျော်မမလေး ( ၂၇)	ရောသမမွှေထားတဲ့ မိုးကုတ်မြီးရှည်
1. Myue Myue | December 16, 2010 at 5:27 pm
ရက်စက်လိုက်တာနော်.. ဗိုက်ဆာနေတဲ့အချိန်မှ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် လာကြည့်မိတယ်.. သွားရည်ကျပြီးပြန်သွားပြီဗျိုး… 😦